Codsiga Mobilada Suuqgeynta Ugu Fiican! Nooca 3 | Martech Zone
Kooxda cajiibka ah ee Postano mar labaad ayey sameysay, iyadoo ka sare martay dhamaan filashooyinkii aan ka qabay codsi weyn oo mobilaad ah oo wata nooca 3 ee Martech. Waxaan aaminsanahay inay tahay Suuqgeynta ugu fiican iPhone App dibedda (Android soo socda)!
Marka ugu horeysa waa dib-u-habeyn aad u jilicsan oo isku dhafan Facebook-sida bidix bidix ah. Waxay sahlaysaa inaad rogto oo aad doorato qaybta ama warbaahinta aad jeceshahay inaad ku dhex wareegto - oo ay ku jiraan Podcasts-keena, Fiidiyowyada iyo Dhacdooyinka - iyadoo la kordhinayo aragtida muuqaalka markii la akhrinayo hal maqaal. Waa interface qurux badan oo aad loo isticmaali karo.
Muddo 3 bilood gudahood ah waxaan saddex jibaarmay tirada isticmaaleyaasha mobilada - ku dhowaad 1,000 hadda. Iyo, sidii aan horey wax uga qornay, hawlgelinta iyo tirakoobka la xiriira adeegsadayaasha moobiilka waa kuwo aad u fiican. Isticmaalayaasheena ayaa waxbadan akhriya, daawada waxbadan, dhagaysta waxbadan oo waqti badan kubixiya barnaamijyada kale. Waad ku mahadsan tahay Webtrends kuwa weyn falanqaynta dalabka moobiilka!
Waxaa laga yaabaa in tan ugu muhiimsani ay tahay isdhexgalka bilaa micnaha ah ee WordPress wuxuu ka dhigan yahay inaan loo baahnayn inaan wax uun qabanno si aan u cusbooneysiino codsigeenna. Fiidyowyo, fiidiyowyo, Boodhadh qoraallo ah iyo qoraalo qoraallo wadayaal ah ayaa dhammaantood si otomaatig ah loo cusbooneysiiyaa maaddaama aan ku daabacno waxyaabaha ku jira bartayada. Barnaamijyadu xitaa waxay leeyihiin digniino moobayl ah iyo awood ay ku keydsadaan maqaallada aad ugu jeceshahay. Postano runti wuxuu uqalmaa abaalmarin shaqadan cajiibka ah ee ay qabteen.
Soo Degso Barnaamijkeena Moobilka Hadda!
Waa kuwan tirakoobyadeenna ilaa taariikhda
Tags: app iyo appipad appsuuq geynta teknolojiyadda suuq geyntacodsiga mobilecodsiga mobilada moobiilkapostanobarnaamijka postano3 Versionwordpress mobilada app